Baby Kalinda - Ejiri Baby Photo Kalinda akara Mkpa AFỌ
> Resource> Atụmatụ> Mee a Baby Kalinda akara Mkpa AFỌ
Inwe nwa ọhụrụ bụ ihe omume ukwu maka ezinụlọ ya dum. Site ka afọ ime gaa nwata, ị chọrọ ịkwụ ụgwọ ezuru ntị nwa gị. A nwa kalenda-enyere gị aka ọma hazie ruru ụbọchị na-echeta ihe ndị dị mkpa ụbọchị ncheta.
Pregnancy Photo Kalinda
Ụbọchị Kacha Mkpa nke afọ ime a tụrụ anya na nnyefe Ụbọchị (EDD) nke bụ 38-40 izu malite n'ụbọchị mbụ ikpeazụ gị menstrual oge (LMP). Ma ọ bụla ụbọchị bụ nnọọ mkpa n'ihi na nwa gị mkpa ezi ka ọ ka mma na-elekọta tupu ọmụmụ nwa. Ya mere, ị na-atụ aro ka ịgbakwunye ihe ọmụma banyere otú nwa gị ga-azụlite izu na ime kalenda. Ọ bụ ezi echiche iji tinye ụfọdụ yi foto na kalenda n'ihi ụmụ ọhụrụ n'anya na-ekiri ha mgbe ha na-eche ụwa a.
Baby Mbụ Year Kalinda
Tupu nwa gị mbụ ụbọchị ọmụmụ ncheta, e nwere ọtụtụ mbụ milestones maka na nwa gị na ị na-enweta na usọrọ. Mfe akara pụrụ iche ụbọchị on a nwa kalenda nke nwere ike maa ghọọ a dị oké ọnụ ahịa akụ a ndụ oge. Ọ bụ na-a ezi ụzọ soro nwa gị mmepe ụbọchị.
Easy iji mee ka a mara mma Baby Kalinda
Mgbe ị pụrụ ịzụta a tupu e biri ebi nwa na kalenda na ụlọ ahịa, gịnị ma i mee a hazie nwa kalenda na bụ ihe pụrụ iche maka na nwa gị. I nwere ike mbubata ọkacha mmasị gị photos; tinye ihe ọmụma bara uru; na ọbụna na-agụnye ọkacha mmasị gị poems. The ọzọ nzọụkwụ ga-eduzi gị esi mee ka a mara mma nwa kalenda na iCollage for Mac.
Nzọụkwụ 1: Họrọ a kwesịrị ekwesị nwa kalenda template
Mgbe ị mepụtara foto collage si ndebiri, n'okpuru window ga-egosi n'elu. Ka ịmepụta a ahaziri nwa kalenda na foto, na-aga Kalinda na họrọ a kalenda template na-amalite a kalenda collage si template.
Baby Kalinda Atụmatụ:
1. Pịa ekpe ala njikọ 'Download All Templates' iji na-niile fabulous ndebiri maka free.
2. Jiri a ezu nke ndebiri ike multiple-na peeji foto kalenda, na ibipụta na gị na ngwa nbipute.
Nzọụkwụ 2: Import photos n'ime kalenda template
Nanị ịdọrọ & dobe foto na kalenda scrapbook peeji ma ọ bụ abụọ click foto thumbnail ka ịgbakwunye foto. Usoro ihe omume nkwado .jpg, .bmp, .png, .emf, .wmf, na .tiff ewu ewu foto formats.
1. Ọ bụrụ na gị na kalenda foto bụ oke buru ibu aka zuru ugbu a na eku, pịa Zoom Ọ button na foto edit ngwá ọrụ ka ibubaa si foto na eku.
2. Site na green cross na foto, i nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nke foto na eku. 3. I nwere ike foto kalenda maka ihe ọ bụla afọ ị chọrọ. Ka kalenda afọ, họrọ ọ bụla ọnwa na pịa mbụ bọtịnụ na smart ngwá ọrụ mmanya. Jiri otu usoro na-akọwa ọnwa nke afọ. Ị pụrụ ọbụna na-anakọta niile dị mkpa ọnwa na otu kalenda page.
Nzọụkwụ 3: Zọpụta dị kalenda foto ma ọ bụ ozugbo ibipụta
Mgbe na-eme nwa kalenda, i nwere ike ịzọpụta ya na fọrọ nke nta niile nkịtị graphic formats na mgbe ahụ-ezite ya site email ma ọ bụ ozugbo setịpụrụ dị ka desktọọpụ akwụkwọ. Ebe a anyị na-ebipụta ya na a ejikọrọ na ngwa nbipute. Jide n'aka na ngwa nbipute arụ ọrụ nke ọma tupu ebipụta.
I nwere ike ma na-ebipụta otu peeji ma ọ bụ multiple peeji nke kalenda site ikwu na peeji nke site Họrọ Page bọtịnụ. Nghazi na okirikiri nhọrọ ukwuu dị mkpa iji na-ebipụta a zuru okè nwa kalenda. N'ihi na ụfọdụ nwa kalenda template, i kwesịrị hazie okirikiri nhọrọ ukwuu (na ala n'aka nri okirikiri nhọrọ ukwuu) iji nweta zuru okè Mbipụta.